Iindidi ka-Arabic kuba abantwana Tangier Institute
Izifundo ka-Arabic kuba abantwana kuza kuba ngokusekelwe iincwadi adapted kwezi: tomes ka-Medina
Imbono yethu ingaba ngenene ukwenza kwabo elizimeleyo kwi-kobuso isi-ulwimi
Izifundo ka-Arabic kuba abantwana kuba boys and girls (mixed iklasi), abo titshala iya kuba utitshala educator, bathambe kakhulu wayemthanda ngomoya wakhe pupils ezincinane. I-nenkululeko ikhalenda, izifundo ka-Arabic kuba abantwana kwi-Tangier Institute iya kuba efanayo njengoko ukuba nawuphi na esikolweni.
Ukuziqhelanisa (ukusuka iminyaka esibhozo): iklasi ezicetywayo yi iklasi ka-ukuziqhelanisa
Izifundo ka-Arabic kuba abantwana uya injongo ukubuyisela yona inqanaba ngoko ke ukuba banako familiarize kwabo ne-Arabic ulwimi ngaphandle kakhulu kakhulu rushing okanye hayi baye bazive frustrated kwi class kunye ezinye moroccans othetha nesiarabhu, ukususela zabo kakhulu young ubudala.
Izifundo ka-Arabic kuba abantwana ayisayi zingaphezu iiyure ezintathu ngosuku
Siya kuqwalaselwa ukuba kwanele ukwazi ukuba abanye abazali nika isithuba izifundo ukuba abantwana babo ngamanye subjects. Izifundo ka-Arabic kuba abantwana baya kuqhubeka kulo lonke esikolweni ngonyaka ukususela ngoseptemba ukuya juni: nokuzinikela ke a kwalo nyaka. Izifundo ka-Arabic kuba abantwana: – Intlawulo yobhaliso: entsha yomntwana (kanye ngonyaka) anesibhozo isihlanu -iinyanga ezi – unit-format (ixabiso njengokuba umsebenzi woshicilelo cinezela)
← Kuhlangana umfazi kwi bedeux
Arabian Umhla: Incoko Umhla kwi-intanethi →